ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးအနီး - နတ်မောက်လမ်းသွယ်တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-9630513
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာလမ်းတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-9630492
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဦးချစ်မောင်လမ်းအနီးရှိ လုံးချင်းအိမ်ရောင်းမည်။
Ad Number S-9629308
Ad Number S-9626062
ဗဟန်း အင်းယားမြိုင်လမ်းသွယ် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
Ad Number S-9625796
ရွှေတောင်ကြားလမ်းမပေါ် သုံးထပ်ခွဲတိုက် ရောင်းမည်.
Ad Number S-9621294
Ad Number S-9621258
ရွှေတောင်ကြား(1) လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်.
Ad Number S-9618819
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြား ရပ်ကွက်ပြင်ဆင်ပြီးလုံးချင်းတိုက်ရောင်းမည်
Ad Number S-9617672
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားလမ်းတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
56,500 Lakh (Kyats)
Ad Number S-9617027